ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ အောင်မြင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဘ၀ကို ဘယ်လိုစွန့်ခွာမလဲ - Myanmar Network
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ အောင်မြင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဘ၀ကို ဘယ်လိုစွန့်ခွာမလဲ
Posted by Kyawt K Khine on June 25, 2015 at 15:27 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လုပ်ငန်းခွင်မှာ လစာအနေနဲ့ရော၊ အလုပ်အကိုင်အပိုင်းမှာပါ အဆင်ပြေနေ တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ရှိ အလုပ်က ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ် ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို ကြီး မားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အောင်မြင်နေ တဲ့ ၀န်ထမ်းဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတည်ထောင်တဲ့ နေရာမှာလည်း Right Time, Right Place, Right Decision ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်တွေအတော်များများကတော့ လက်ရှိ အလုပ်မှာပဲ မြောမနေပါနဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အ လုပ်ကို လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ ဆိုကြ ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ စွန့်စားတဲ့ အခါ အောင်မြင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဘ၀ထဲက နေ ထွက်ခွာဖို့အတွက် ခက်ခဲနေတတ်ပါ တယ်။ ဒွိဟစိတ်တွေ၊ ကြောက်စိတ်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို အဆင်ပြေပြေအသားတကျဖြစ်နေတဲ့ ၀န်းကျင်တစ်ခုကနေ စွန့်ခွာဖို့ ၀န်လေး တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်တွေက Comfort Zone ထဲကနေထွက်ဖို့အတွက် အကူအညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါ တယ်။
ခြေလှမ်းစိပ်စိပ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြောက် စိတ်တွေကို ကျော်လွှားပါ။ ဒီနေရာကိုပဲ ဖက်တွယ်မထားပါနဲ့။ တချိန်ချိန်မှာ Risk ယူပါ။ အဲဒီလို risk ယူတဲ့နေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့အချိန်၊ မှန်ကန်တဲ့နေရာ၊ မှန် ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ အောင်မြင်နေ တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းက သေးငယ်တဲ့ ခြေလှမ်း လေးကနေ စတင်ကြတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါ နဲ့။
အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဝန်ထမ်းတစ် ယောက်ဘ၀ကနေ ထွက်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်း ချက်ရှိရပါမယ်။ ကိုယ်က တစ်နေ့မှာ ၀န်ထမ်းအများကြီးကို အုပ်ချုပ်တဲ့ ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆို တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တွန်းအား ပေးရပါမယ်။ အောင်မြင်ပြီးအသားကျနေ တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဘ၀က လှပတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ အလုံးစုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်တဲ့ နေရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်နိုင် ပါဘူး။ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ နေရာကနေထွက်ဖို့လည်း ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်တွန်းရမယ်၊ အရာရာတိုင်းကို သင်ယူဖို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွန်းရ ပါမယ်။
အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို ကြိုတွေးပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့
လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ဘ၀ကို စွန့် လွှတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ အခါ အဆင်မှပြေပါ့မလား၊ ဘယ်လို အ ခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံရမလဲစတဲ့အကြောင်းတွေတွေးပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ လက် တွေ့မလုပ်ကြည့်ဘဲ ကျရှုံးမှာကို စဉ်းစားပြီး တွေးကြောက်နေတာကသာ ကြီးမားတဲ့ ကျရှုံးမှုတစ်ခုပါ။ တစ်ခါတလေမှာ ကျရှုံး မှုကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်နေ တတ်ပါသေးတယ်။ အောင်မြင်တဲ့အတွေ့ အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျရှုံးတဲ့ အတွေ့အကြုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆရာတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ကိုယ့်ကို သင်ကြားသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေအတွက် အဲဒီ သင်ခန်းစာတွေကတစ်ဆင့် သင်ယူ ပြီး ပိုပြီးကြီးတဲ့ နောက်ထပ်စွန့်စားမှုတစ် ခုယူဖို့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ် ဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်မလာသေးတဲ့ အခက်အခဲ တွေကို ကြိုတွေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေမယ့် အစား အခက်အခဲတွေ၊ အရှုံးတွေထဲကနေ ဘယ်လိုသင်ယူမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရပါ မယ်။
ဆင်ခြေပေးဖို့ ကြိုးစားတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ရိုးသားပါ
ဒီအချက်က အရေးကြီးတဲ့အချက် တစ်ချက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရိုးသားရပါ မယ်။ "ဒီအလုပ်အတွက် အခုအချိန်က အချိန်ကောင်း မဟုတ်သေးဘူး} လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြေပေးဖို့ ကြိုးစား မယ့်အစား "ငါ ဒီအလုပ်ကို စတင်ဖို့ ကြောက်ရွံ့နေတယ်" လို့ ရိုးရိုးသားသား ပြောသင့်ပါတယ်။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ နေ ရာ တစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက် ဘယ်အချက် တွေက ကိုယ့်ကိုအမှန်တကယ်အနှောင့် အယှက်ပေးနေသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အရိုးသားဆုံးဖြေကြည့်ပါ။ အ ကောင်းဆုံးနေရာအတွက် ရှေ့ဆက် လှမ်းတက်ဖို့ အကြီးမားဆုံးအခွင့်အလမ်း တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
အမှားလုပ်မိတဲ့အခါမှာ အလွန်အ မင်း စိုးရိမ်သောကရောက်မယ့်အစား ပြုံး နိုင်ရယ်နိုင်ဖို့ သင်ယူပါ။ စွန့်စားမှုယူတဲ့အခါ မှာ မအောင်မြင်ခင် မလွဲဧကန်ပါဝငလာမှာကတော့ ကျရှုံးမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန် နေတာက အများအမြင်မှာ အရူးတစ် ယောက်နဲ့ တူစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်အရာကိုမဆို အပြုံးမပျက်ဖြေရှင်းပါ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ့်သူက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင် တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။
လက်ရှိအောင်မြင်တဲ့ဝန်ထမ်းဘ၀ကနေ ဘယ်လိုစွန့်ခွာခြင်းက ကိုယ့်အတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေသလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ပါ
တကယ်လို့ ကိုယ်က ကိုယ်ပိုင်လုပ် ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက် ပြီ၊ ဒီအလုပ်က ထွက်သင့်တဲ့အချိန်တန်ပြီ ဆိုရင် ပထမဆုံး စဉ်းစားရမယ့်အချက်က လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဘ၀ကနေ ဘယ်လိုစွန့်ခွာမလဲ။ အဲဒီလိုစွန့်ခွာတဲ့နေရာ မှာ ဘယ်လိုစွန့်ခွာခြင်းမျိုးက ကိုယ့်အ တွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေသလဲစတာ တွေကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ အသက်မွေးမှုဆိုင် ရာပညာရပ်တွေကို ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင်လုပ်မလဲ၊ ဒီနေရာထက်ကျယ်ပြော တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အောင်မြင်အောင်ဘယ် လိုရပ်တည်မလဲစတာတွေကိုလည်း စဉ်း စားရပါမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ပြီး သက်သောင့် သက်သာဖြစ်နေတဲ့ နေရာကနေထွက်ခွာ ဖို့အတွက် ဒီအချက်ကလည်း အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင် မှုအသစ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ် ဘာသာစကား အသစ်တစ်ခုခုကို ထပ်မံသင်ယူပြီး ကိုယ့် ရဲ့ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတကို ချဲ့ထွင်ပါ။ အသစ်အသစ်တွေကို အမြဲမပြတ်လေ့လာ သင်ယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ပါ။
Permalink Reply by Amazing Yaya on June 26, 2015 at 11:42
သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ ပုံမှန်လစာ ပုံမှန်ပိတ်ရက်လေးတွေနဲ့ သာယာနေကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ကျမတို့ ဒီထက်ကို ပိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အရာရာတိုင်းကတော့ အကောင်းအဆုိုး ဒွန်တွဲနေတာချည်းပါပဲ။
ဒီတော့က ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာ မိမိ အချိန် မိမိပိုင်သလို မိမိ အချိန် မိမိ အကျိုးရှိရှိ ပိုမို စီမံတတ်ဖို့ဆိုတာ လိုလာပြန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရကတော့ ပထမ ခြောက်လလောက်မှ ခက်ခဲပါတယ်။ ထမင်းငတ်လောက်တဲ့အထိတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှု များတာပါ။ ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာမျိုးပါ။ သို့သော် ကြိုးစာရမှာကိုယ့်တာဝန်ပါ။ မိမိ အရည်အချင်းကို ယုံကြည်ပါ။ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင် အကုန်အောင်မြင်မှပါပဲ။
Permalink Reply by Kyawt K Khine on June 26, 2015 at 14:29
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မယာ
Permalink Reply by Shin Min Aung on June 26, 2015 at 12:46
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင်လေး
Permalink Reply by wut yi on June 26, 2015 at 13:23
Permalink Reply by Ei Poke on June 26, 2015 at 14:04
လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗီတာမင်အားဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ .......
Permalink Reply by myinthlaing on June 26, 2015 at 14:46
Permalink Reply by Myat Thu Htoon on June 26, 2015 at 20:44
Permalink Reply by Richard Michael William on June 27, 2015 at 11:21
Permalink Reply by Nwe Nwe Khaing on June 28, 2015 at 11:23
Permalink Reply by hanthulwin09@gmail.com on June 28, 2015 at 22:55
Thank you, for your article.
Really I appreciated when I reading your article and nice post.
Han Thu Lwin
Permalink Reply by Kyawt K Khine on June 29, 2015 at 14:10